Tag: vhidhiyo kutendeuka | Martech Zone
Tag: kutendeuka kwevhidhiyo
Mabhureki Anoshuvira Kubatanidzwa Anofanira Kuita Izvi Zvitatu Zvinhu
China, December 2, 2021 China, December 2, 2021 Juli Greenwood
Nyika payaive yakavharika muna 2020, zviitiko zvedhijitari zvakapfuma nemifananidzo nemavhidhiyo zvakaita kuti tirambe takabatana. Taivimba zvakanyanya kupfuura nakare kose kune dzimwe nzira dzechinyakare dzekutaurirana kwedhijitari uye takatora nzira nyowani uye itsva dzekugovera hupenyu hwedu uye kubatana kubva kure. Kubva kuZoom kuenda kuTikTok uye Snapchat, isu taivimba nemhando dzedhijitari dzekubatanidza chikoro, basa, varaidzo, kutenga, uye kungoramba tichionana nevadikani. Pakupedzisira, simba rezvinyorwa zvinoonekwa raiva nechirevo chitsva. Zvisinei
Wondershare UniConverter: Bulk Vhidhiyo Trimming, Conversion, Compression, uye Optimization
Chishanu, Mbudzi 19, 2021 Chishanu, Mbudzi 19, 2021 Douglas Karr
Sezvo vatengesi vanoshanda neakawanda evhidhiyo zviyero - kubva kumafaira emabhurawuza akasiyana, zviyero zvematanho akasiyana, uye kudzvanya kweyekuteedzera kwakaringana, kushanda kuburikidza nevhidhiyo editing chikuva kuburitsa mafaera anodiwa kunogona kunetsa. Yakanakisa uye inotengeka chigadzirwa chandakashanda nacho kuita izvi ndeye Wondershare UniConverter. Semuenzaniso, femu yangu iri kuendesa Shopify Plus chitoro chemutengi wefashoni izvozvi uye isu taiva nazvo zvinosanganisira.
4 Matipi Ekugadzira Yakabudirira Vhidhiyo Kushambadzira Strategic kune rako Bhizinesi
NeChishanu, Gumiguru 30, 2020 NeChishanu, Gumiguru 30, 2020 Jeff Galea
Haisi chakavanzika chekuti kushandiswa kwevhidhiyo mukushambadzira zvemukati kuri kuwedzera. Mumakore mashoma apfuura, vhidhiyo yepamhepo yakaratidza kuve inonyanya kuita uye inomanikidza fomu yezvinyorwa zvevashandisi. Zvemagariro midhiya rave rimwe remapuratifomu anonyanya kushambadzira evhidhiyo, uye ichokwadi icho chisingafanirwe kutorwa zvishoma. Tine mamwe matipi akakosha kwauri ekuti ungagadzire sei mavhidhiyo anoshanda anotora pfungwa
Friday, October 30, 2020 Friday, October 30, 2020